Bilaogera Asongadina: Edgar Andres Yana Lisme · Global Voices teny Malagasy
Bilaogera Asongadina: Edgar Andres Yana Lisme
Voadika ny 01 Septambra 2018 18:45 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny Marsa 2010)
“Tiako ho fantatra ny faritaniko” hoy ilay bilaogera Edgar Andres Yana Lisme nanamafy, teraka tamin'ny 10 Novambra 1974 tao amin'ny tanàna Chaguaya tao amin'ny faritanin'i Camacho ao Bolivia izy. Lehilahy te-hahafanta-javatra izy ary tia mampiana-tena. Nandia fianarana tao amin'ny sekolin'i Francisco Beltrán Díaz tao Chaguaya izy ary avy eo nianatra tao amin'ny Lisea Germán Busch mielanelana isan'alina mifandimby. Nanomboka nianatra tao amin'ny Sampam-pampianarana Siansa tao amin'ny tobim-pianarana Chaguaya ao amin'ny Oniversitem-panjakana any El Alto izy tamin'ny taona 2003.
Nanatevin-daharana ny atrikasa fanentanana bilaogy nokarakarain'ny tetikasa nahazo vatsy tamin'ny Rising Voices,Voces Bolivianas, izay natao tany El Alto izy tamin'ny Janoary 2008. Ary nanova ny fiainany izany. Tsy manana aterineto na finday any amin'ny tanàna misy azy any the Altiplano izy. Saingy nankany El alto (tokony ho 2 ora miala ao an-trano) izy mba hamoaka votoaty ao amin'ny bilaoginy, ny kaontiny twitter, ny kaontiny Facebook ary ny kaontiny Flickr. Ary raha tsy fantatrao izany torohay izany, dia tsy ho fantatrao mihitsy ny fanamby atrehany mba hahafahany miserasera sy mazoto mamoaka votoaty antserasera.
Betsaka ny olona hiala an-daharana amin'ny fikatrohana ao amin'ny media sosialy sy ny fanaovan-gazetin'olompirenena rehefa tsy manana fidirana aterineto ao amin'ny vondrom-piarahamoniny izy ireo. Saingy manomana ny votoatiny ivelan'ny aterineto kosa i Edgar ary mampiditra izany amin'ny daty manaraka rehefa mandeha mankany El Alto.
Niresadresaka taminy tamin'ny alàlan'ny mailaka izahay, izay nadikan'i Eduardo Avila.
Edgar miaraka amin'ireo mpandray anjara hafa tamin'ny atrikasa tao El Alto.
*Ahoana ny fihetseham-ponao voalohany tamin'ny atrikasa sy ny bilaogy amin'ny ankapobeny?
Liana aho satria tsy nahalala ny fampiasana bilaogy sy fitaovana hafa. Tamin'izany fotoana izany dia hafahafa ny nianatra momba izany tolotra izany.
*Lazao anay ny momba ny bilaoginao. Nahoana ianao no nifidy ny lohateny NUESTRA CULTURA PRIMERO (Ny kolontsaintsika aloha)?
Ny olona dia ampahan'ny kolontsaina andavanandrontsika izay asa hijoroan'izany anarana izany.
Edgar miaraka amin'ny olona tao an-tanàna nandritra ny fetibe.
* Ahoana no nanovan'ny bilaogy ny fiainanao?
Mampahafantatra ny faritaniko aho, ny fifandraisana ananako hatrany dia ny andrim-panjakana manome tolotra aterineto, ary ankilan'izany, rehefa tonga ao an-tanàna ny olona ary mitsidika ny bilaogiko. Dia manontany vaovao, fombafomba avy amin'ny faritra sy faritany izy ireo.
* Ahoana ny fahatsapanao momba ny fihaonamben'ny fampitam-baovao an'olo-tsotra toy ny Bloguivianos sy Barcamps.
Raha sambany nanatrika ny atrikasa Bloguivianos aho dia nahita ny fifandraisana mivantana amin'ireo vondrom-piarahamonina mpifindra monina any Espaina, Etazonia, Meksika, milaza ny zavatra niainan'izy ireo. Ny BarCamp dia toerana iray ahafahan'ny olona manolotra malalaka ny lohaheviny.
Fety fankalazana ny Olomasina tany Chaguaya. Sary avy amin'ny Flickr an'i Edgar. All Saints festivities in Chaguaya. Image from Edgar's Flickr.
* Inona no tianao hotratrarina amin'ny bilaoginao?
Mba hahazoana fifandraisana bebe kokoa amin'ny olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, mba ho matihanina amin'ny lahatsoratra izay soratako.
* Inona no drafitrao hoavy momba ny fampiasana ny mediam-bahoaka?
Ny fanapariahana sy fanatrarana ny ankamaroan'ny olona avy ao amin'ny faritaniko, Camacho, indrindra ho an'ireo mpianatra, amin'ny alalan'ny seminera, atrikasa, ankoatra ny hafa, mikasika ny fampiasana bilaogy, twitter, Facebook, picassa ary fitaovana hafa.
Tena manolo-tena amin'ny zavatra ataony izay iasany miaraka amin'ny manampahefana ao an-toerana mba hametraka Tele-center (seha-bahoaka miaraka amin'ny fidirana solosaina) Edgar. Nahemotra ny tetikasa, saingy momba te-hanohy izany izy.
Ao amin'ny bilaoginy, manoratra momba ireo kolontsaina ao an-toerana izy ary manazava ireo fombafomba samihafa. Manoratra momba ny olam-piarahamonina sy mitodika amin'ny manampahefana mikasika ny fomba fahitana vahaolana ho azy ireo izy. Nizara ity taratasy ity ho an'ny renim-pianakaviana afa-jaza iray tsy fantatra anarana izay tena mampahonena izy. Maro be ireo bilagoera manerantany tahaka an'i Edgar izay, miditra amin'ny mediam-bahoaka, ary miady amin'ireo sakana rehetra mba hizara amin'izao tontolo izao momba ny fanambin'izy ireo – izay zara raha fantatr'izao tontolo izao.
Mediam-bahoaka 4 andro izay